Vaovao - TEAM BULIDING
Adaptatera sy faritra
Fanilo momba ny gazy mandrehitra tanana
Fanilo Gas Piezo Ingition
Amin'ny andro voalohany amin'ny 2020, mpiasa Kalilong 100 no mivory hisakafo hariva. Mandritra ny sakafo hariva dia mikasa ny hanao lalao, hihira, handihy sns izahay. Ny tale jeneraly Andriamatoa Chen dia nanao kabary ary nidera ireo mpiara-miasa izay miasa mafy, ary manome bonus ho azy ireo hanohizany ny ezaka amin'ny taona 2020.
Fotoana fandefasana: Aug-21-2020
Company: Yuhuan Kalilong Metal Products Co., Ltd.
Address: Wujia Village, Chumen Town, Tanànan'i Yuhuan, faritanin'i Zhejiang, Sina.
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tsindry sy ny fanovana ny onja dia esorina amin'ny vavon'ny basy ny entona ary dorana mba hananganana lelafo mandritry ny hafanana avo ...
1. Fanaraha-maso: ampifandraiso ny faritra rehetra amin'ny basy famafazana, hamafiso ny fametahana fantson-tsolika, (na hamafiso amin'ny tariby vy), ampifandraiso ny mpampitohy gazy mihidy, akatony ny basy ...
Ny flamethrower dia karazan'entana ivelany vaovao, izay an'ny fitaovana fandrahoan-tsaha. "Torch" no iantsoana azy any amin'ny firenena vahiny. Karazana ...
Amin'ny andro voalohany amin'ny 2020, mpiasa Kalilong 100 no mivory hisakafo hariva. Mandritra ny sakafo hariva dia mikasa ny hanao lalao, hihira, handihy sns izahay. Tale jeneraly Andriamatoa Chen nanao spe ...
Taona miavaka ny 2020, fanombohana sarotra tokoa .coVID-19, voarara nandritry ny telo volana ny faritanin'i Hubei, ny antsasaky ny mpiara-miasa amin'i Hubei ao amin'n ...
Aorian'ny fahazoana ny mari-pankasitrahana CE avy amin'ny Intertek sy TUV dia mahazo tatitra momba ny fanandramana vaovao momba ny EN521 izahay.
inona ny pridcution azo antoka: ny prodcution azo antoka dia ny firaisan'ny fiarovana sy ny prodcuton, ary ny tanjony dia ny hampiroboroboana ny famokarana soa aman-tsara, ary ny prodcutionmust dia tokony ho azo antoka. Manao soa ...
Hanatrika ny China Hardware Show any Shanghia isika amin'ny 10 ka hatramin'ny 13 Oktobra.
Vokatra mafana, Sitemap
Teny lakile A, Keywords B,